SWMC 360-DTH DILLING RIG PAZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVOKUVAKA SHANDONG PROVICE,CHINA |
SWMC 360-DTH DILLING RIG PAZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVINHU SHANDONG PROVICE, CHINA
Xuanhua drilling rig yakaita imwe budiriro yakanakisa - mayunitsi makumi mashanu eSWMC 360 ekuchera RIGS akashandisa matani anodarika chiuru nemazana masere ezvinoputika mukati memwedzi usingasviki mumwe, kanopfuura kaviri kudyiwa kwezuva nezuva.
Tianchen Qixiang Nylon New Material Project, chirongwa chakakosha chePurovhinzi yeShandong ine mari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emadhora, yakaita mhemberero yekuisa hwaro muLinzi District, Zibo City musi wa19 Nyamavhuvhu 2019. pedza tekinoroji yenylon, zadza mukaha muhunyanzvi hwepamba uye indasitiri, uye kusangana nekukasira kwenyika kudiwa kwezvinhu zvitsva zvenaironi.
Shenwer 360-DTH, yakavhurika-mhepo hydraulic submersible drilling rig, yagara ichishanda muhondo yekuenzanisa ivhu yechirongwa ichi. Shenwar 360-DTH drilling rig yanga ichishanda siku nesikati, ichishandisa matani anopfuura 1,800 ezvinoputika mukati memwedzi isingasviki kubva kumakumi mashanu emayuniti rigs, inodarika kaviri mari inoshandiswa mukushanda kwezuva nezuva.
Iro basa rakaoma kudaro, kuita sei kuti SWMC drilling rig ipedze?Izvi zvinokonzerwa nerutsigiro rwemhando yepamusoro rweSWMC 360DTH.
SWMC 360DTH ndiyo yakasarudzika modhi yeShenwar hydraulic drill series, inova crystallization yekambani mushure memakore gumi nematatu ekuchera ruzivo rwekugadzira nekutsvagisa nekusimudzira tekinoroji precipitation. kushandiswa kwakaderera, asi zvakare yakasarudza yakawedzera hydraulic simba system, yakasanganiswa nemhinduro yemutengi uye mazano ekuvandudza dhizaini yepuratifomu yekutonga, kuitira kuti mashandiro agone kuona iyo yepakati kudzora kweakawanda actuators.
Muchikamu chekugadzira, kuburikidza nekubatana neJapan Furukawa Drilling Machine, iyo 360DTH yakatevedzana yekuchera muchina inovandudzwa mukugadzira tekinoroji uye mashandisirwo emidziyo. Izvo zvakakosha zvikamu uye zvikamu zvinotora akawanda anozivikanwa epamba uye ekunze mabhureki ezvigadzirwa, kushandiswa kwemanganese simbi inotsvedza furemu uye polymer kupfeka-inodzivirira zvinhu, kuitira kuti hupenyu hwebasa hwechigadzirwa huwedzere kakawanda.
Mushure mekubudirira kwebudiriro, iyo 360DTH drilling rig yakatanga kuiswa mukugadzirwa mushure memaawa mazana maviri ezviyedzo zvinoparadza pamusoro pekugara, kusununguka kwekushanda, hupfumi uye kugona, kuwanda kwekuchengetedza uye zvimwe zvikamu zvekushanda kwechigadzirwa kusangana nekupfuura. magadzirirwo anotarisirwa.
SWMC 360DTH hydraulic drilling rig inodzoreredza mweya weSWMC kutsvaga chokwadi uye pragmatic kwevanhu, usambonyevenutsa zvinodiwa zvemhando yechigadzirwa, uye haana kukanganwa kugadzira hupfumi, hunoshanda hwekuchera zvigadzirwa zvevatengi.
Kusvika pari zvino, kuchine chizvarwa chekutanga zvigadzirwa zve360DTH zvakatevedzana mumusika kuti zvishandire vatengi.Uku hakusi kungonyanya kuita kwemhando yepamusoro yechigadzirwa cheSWMC drilling RIGS, asiwo izere nekuedza kwevose mushure- nhengo dzeboka rebasa rekutengesa reSWMC.Shenwar kambani 12 inyanzvi mushure mekutengesa vashandi vebasa, kupfuura mazuva 280 pagore munzvimbo yevatengi, kupa vatengi bhutsu yekudzidzira kudzidzisa kutungamira, kugadzirisa matambudziko, kugadzirisa, kugadzira engineering uye mamwe masevhisi, panguva imwe chete. nguva uchishingairira kuunganidza zvakataurwa nevatengi, mhinduro kukambani kuti ipe ruzivo rwekutanga-ruoko rwekusimudzira zvigadzirwa.
Nekuda kweizvi, muShandong Tianchen JiXiang Nyowani Yechishandiso purojekiti yepasi muhondo, "360 DTH drill kuti vatambe zvikanganiso zvavo zvishoma, kugona kwakanyanya, kugadzirisa kuri nyore kumirira mukana, kubatsira kuvaka timu pakupera kwaFebruary yakakanganiswa ne kubuda kwenyaya dzakakomba, dzakapedza iyo yaitarisirwa kupedzwa mukupera kwaChivabvu kuitira basa rekugadzirisa ivhu.